ဘာတွေလို့ ထင်ပါသလဲ…? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ဘာတွေလို့ ထင်ပါသလဲ…?
Posted by ကို ထွဋ် on Jun 26, 2014 in Facebook, Health & Fitness, Other - Non Channelized, Q&A | 19 comments
Site တခုကယူပြီး ရှယ်ထားတာပါ…
ကိုယ့် ဥ ကိုယ်တင်ပါလားညော်
ဘယ်ဆိုက်ကလင့်လဲ ဆိုတာ.. မန့်ပါဦး…
သိတဲ့သူတွေလာ ကြလိမ့်မယ် အ နော် တော့မတိဗူး
ဘာမှမထင်ဘူး စော်ကားတယ်လို့ထင်တယ်။ ဝင်ရခက်ဖွင့်ရခက် ပွင့်လဲလာကော ဒေါသထွက်ရရော
အဖြေမှန်ကတော့ အာလူးတွေဖြစ်ပါတယ်… ထူးခြားမှုမို့… ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နိုင်တာမို့.. တင်ထားတာပါ… အမှန်က အဖြေမှားလဲ… ငြင်းခုန်ရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စေဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ… ကို မသိတာကို မသိဘူး မပြောဘဲ မိုက်ရိုင်းတာရော.. လူမိုက် အားပေးထားတဲ့ Plus တွေရော အံ့သြမိပါတယ်… အရင် မန္တလေး ဂဇက်ကို လွမ်းမိပါတယ်… ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ ပို့စ်လာတင်တာ မဟုတ်ပါ… ကိုင်ရေ ဒီတိုင်းကြည့်နေမှာလား… ဒီဆိုက်ကလေး ကြည့်တဲ့သူမရှိတုန်းက လူတွေကို လိုက်မိတ်ဆက်ပြီး ကြည့်အောင် ကြိုးစားခဲ့တာ ကို တွေပါပဲ…
ဒါက အော်ရဂျင်ရယ် ဆိုက်ပါ.. သွားကြည့်လိုက်ကြပါဦး…
ရေညေ့သဏင်း – အားငယ် နဲ့ – အားပေးနေဒယ် –
အချိန်မစီးတဲ့ ဟွာဒွေ ပြောဒါ မှတ်ထားနဲ့- အလဂါးသက်သက် အနိုင်ယူဒယ်-
စာဒွေ ဖတ်ရဒါ အားမရဒေ့ါလို့ – ၀င်လာတဲ့ မသစ်တသစ်လေးဘာ –
ဟဲ့ .. ကိုင်ရေ …ကိုင်တဲ့ … ခေါ… အဲ ခေါ်နေဘီ …
ရွာထဲကိုဖုန်းနဲ့ဝင်ရတယ်။တမိနစ်လေးကျပ် အလကားမရဘူး။ ရွာထဲကလဲဝင်ရခက်တယ်။ လိုင်းကောင်းတုန်းဝင်ရတယ်။ ပိုစ့်တပုဒ်ကို ၅၀ ကနေ ၁၀၀ကြားကုန်တယ်။ ဘာများလဲဆိုအသည်းအသန်ဖွင့်ပွင့်လဲသွားရော ဘာမှမဟုတ်တော့ ဒေါသထွက်တာဘာဆန်းသလဲ။ နောက်ပိုစ့်တွေစုံအောင်မဖွင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါများမိုက်ရိုင်းသတဲ့။ ငါ့ကိုလူမိုက်ပြောရအောင် နင်ဘာကောာင်မို့လို့လဲ။
ပတ် ဘုံ ဘုံ ပတ်ဘုံ ဘုံ
ဘူညဲ – စကားအပြောအဆို သင်တန်း တက်သင့်ဒယ် –
အာဟိ – ငါကွ – တော်တော် ညှော်ဒယ် –
ကြည့်ဒေါ့ – ၄၁၅၅ ဒဲ့ – ရှက်ထှာ
ကို ဆာ မိ ဘုံ ဘုံ အော် လို့  ဟို သူ ဗုန် မ ပြေး လာနေ အုံး မယ်
စိတ်မဆိုးပါနဲ့ TNA.. ဖွင့်ရခက်တာ ကျွန်တော့ ပို့စ်မှ မဟုတ်ပါဘူး.. မန္တလေးဂဇက်က ကို လေးတာပါ.. အက်ဒမင်ကိုသာ အပြစ်တင်ပါရန်… ဆောရီးပါဗျာ.. ကျွန်တော်က ပဟေဠိ သဘောနဲ့ အားလုံးပျော်စေချင်လို့ပါ.. ဆရာကြီးက မှန်အောင် မဖြေဘဲနဲ့ ပြောဆိုသွားတာကိုး… ဟုတ်ကဲ့ပါ.. နောက်ကို အဲလိုမျိုးတွေ မကြိုက်ရင် မတင်တော့ပါဘူးဗျာ.. ဆင်ခြင်ပါ့မယ်.. ပြောမိတာလဲ တောင်းပန်ပါတယ်.. ခွင့်လွှတ်ပါနော်.. ဆရာကြီး…
ကြိုးကိုင်နေသူချိဒယ် – ဟိုဒင်း – ဟိုဒါ – ကြိုးဂွင်း :chee:
အုမို့လို့ဘာအေ ဘရုတ်တုန်းက ဒါဘယ်သူလဲ ဆိုတဲ့ပိုစ့်တွေများ